हेर्नुहोस् : यो हो नेपालको खास नक्सा र जमिन (भिडियो ) – Life Nepali
हेर्नुहोस् : यो हो नेपालको खास नक्सा र जमिन (भिडियो )
काठमाडौं, २६ कार्तिक । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा बनाउन सोमबार निर्देशन दिएको छ । कस्तो हुन्छ त त्यो नक्सा? नापी विभागले तीन वर्षअघि त्यो नक्सा बनाइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले पूर्ण नक्सासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यो सार्वजनिक नगरी थन्क्याइएको छ ।-यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुरा ३३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । कालापानी र लिपुलेकको क्षेत्रफल ६२ वर्ग किलोमिटर छ । लिम्पियाधुरामा तीनवटा गाउँ छन् । कुटी, नावी र गुन्जी, जुन ठाउँ अहिले नेपालको नक्सामा गायब छन् । काली नदीको मुहान् लिम्पियाधुरा हो । त्यहाँ नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार छ । काली नदीको मार्गमा पार्वती कुण्ड पर्छ । पार्वती कुण्डको माथिदेखि छोटा कैलाश छ । पार्वती कुण्डमा काली पानी मिसिन्छ ।
त्यहीं काली मन्दिर पनि छ । काली नदीलाई स्थानीयमा कुटी याङ्दी भनिन्छ । त्यहाँ सौका समुदायको बसोबास छ । सुगौली सन्धिअघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिम काँगडासम्म थियो । सन्धिपछि नेपालको दुई तिहाइ भूमि गुमेको छ । सुगौली सन्धिमा कालीपारी नेपालले दाबी गर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । सुगौली सन्धिको बुँदा ५ मा ‘नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज मौसुफ स्वयंका लागि, मौसुफका उत्तराधिकारी वा वारिसका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशसित सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन, उल्लेख छ ।
तर भारत लामो समयदेखि कालीवारि आएको छ । उसले लिम्पियाधुराबाट करिब ३० किलोमिटरपूर्व भारतीय सीमा सुरक्षा फौज राखेको छ । कालापानीभन्दा ३० किलोमिटर पश्चिमसम्म लिम्पियाधुरा छ । लिम्पियाधुरा मात्र होइन, कालापानी र लिपुलेक पनि भारतीय कब्जामा छ । कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मका तीन गाउँ कुटी, नाबी र गुञ्जीको जनगणना, मालपोत अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक प्रामाण र दस्तावेजले नेपाल भएको पुष्टि गर्छ ।
Previous सीमा अ’तिक्रमण बढेपछि : भारतिय सीमा तर्फ स’शस्त्र प्रहरीका ५९ नयाँ सीमा पोस्ट थपिँदै सेयर गरौ !
Next ट्राफिक प्रहरीले नै ताेड्छन् सवारी नियम : सेयर गरौ !